चीनले हामीलाई थाहै नदिई नयाँ सीमास्तम्भ बनाएको छ, यसमा कुनै स्वार्थ पक्कै होला : पेमा तामाङ
हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका चीनसँग सिमाना जोडिएको गाउँपालिका हो । पछिल्लो समय चीनसँग सीमा विवाद रहेको विभिन्न चर्चा/परिचर्चा भए । तर, सरकार भने चीनसँग कुनै सीमा विवाद नभएको भनिरहेको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा; नेपालमतले शुरू गरेको ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल’ अन्तर्गत आज हामीले हुम्लास्थित नाम्खा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेमा तामाङसँग कुराकानी गरेका छौं । नाम्खा गाउँपालिकाको दुईवटा (५ र ६) वडाको चीनसँग सीमा जोडिएको छ । उपाध्यक्ष तामाङ चीनले एकतर्फी रूपमा सीमास्तम्भ चलाएको जिकिर गर्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ, हाम्रा साथी इन्द्रसरा खड्काले यो र अरू विविध पक्षमा उपाध्यक्ष तामाङसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः
उपाध्यक्षज्यू आजभोलि व्यस्तता कत्तिको छ ?
गाउँपालिकाकै काममा व्यस्त छु । कार्यकाल सकिन अब थोरै समय बाँकी छ । त्यसैले, बाँकी रहेका योजनाहरुको काम अघि बढाइरहेका छौं ।
निवार्चित भइसकेपछि पालिकामा के–के काम गर्नुभयो ?
नाम्खा गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले नेपालको सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो । यहाँको भू–बनोटले नै काम गर्न समस्या छ । विद्युत, सडक, यातायात, खानेपानीको व्यवस्था नभएको यहाँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले सोचेको अनुसार ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौं । पहिले बत्ती थिएन अहिले धेरै ठाउँमा सोलार वितरण गरेका छौं । दुई ठाउँमा यहाँकै जलविद्युतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रो पालिकामा जम्मा ६ वटा वडा छन् । त्यसमा सबैभन्दा विकट भनेको वडा नम्बर ६ हो । त्यहाँ जाने काठेपुल निर्माण गरेका छौं । पालिकाका सबै वडामा सडक सञ्जाल जोडेका छौं । यहाँ तामाङ बढी हुने भएकाले गुम्बा निर्माण गरेका छौं । यस्तै; सिंचाइ, खानेपानी, लगायतका विभिन्न काम गरेका छौं । समग्रमा भन्नुपर्दा; गोरेटो बाटोहरू निर्माण गरेका छौं । त्यस्तै; गुम्बा निर्माण, खानेपानी, सिंचाइ, विद्युतमा काम गरेका छौं । यही हाम्रो उपलब्धि हो ।
सबैभन्दा बढी गोरेटो बाटो निर्माण गर्नुभएको हो ?
हो । हाम्रोमा सबैभन्दा चल्ने भनेको गोरेटो बाटो नै हो । किनकि यतातिर खर्क हुन्छ । खर्क आवतजावतको लागि पनि सडकभन्दा गोरेटो बाटो नै बनाउनुपर्छ । नाम्खा गाउँपालिका पुग्न सदरमुकामबाट हिंडेर दुई दिन लाग्छ । अहिले चाइना बोडरबाट बाटो जोडिएको छ । सदरमुकामबाट लिमी जाने सडक छ । लिमीबाट सल्ली भएर गाडी चढेर जाँदा एक दिन लाग्छ ।
पहिले र अहिलेको पालिकाको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
पहिले बाटोघाटो थिएन । सडक थिएन । कुनै पनि विकासका पूर्वाधार थिएनन् । अहिले कच्ची नै भए पनि सडक पुगेका छन् । धेरैजसो ठाउँमा फोनको नेटवर्कले काम गर्छ । यहाँ भौगोलिक दृष्टिकोणले पनि विकासको काम गर्न गाह्रो छ । तर, पहिलेको भन्दा अहिले धेरै कुरामा विकास भएको छ भन्ने लाग्छ ।
हिल्सास्थित ५ नम्बर प्लेट; हुम्ला, बझाङ र चीनको सीमामा रहेको ४ नम्बर प्लेट र अर्को लिमीको १२ नम्बर प्लेट नयाँ बनाइएको छ । नेपाल पक्षलाई थाहै नदिई नयाँ किन बनाउँछ ? त्यहाँ केही न केही स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । हामीले यो विषयमा केन्द्र सरकारसँग छलफल गरेका छौं ।
चुनावमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो त ?
म स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चुनाव जितेको प्रतिनिधि हुँ । मैले मलाई भोट दिनुभयो भने यो यो गर्नेछु भनेर झुटो आश्वासन दिइनँ । घोषणा–पत्र पनि बनाइनँ । मलाई भोट दिनुभयो भने आफ्नो गाउँठाउँको विकासको लागि सकेको पहल गर्नेछु भनेको थिएँ । त्यो काम मैले पूरा गरेको छु । र, अझै गर्दै पनि छु ।
त्यसो भए सबै काम गर्नुभयो त ?
विकासका काम कहिल्यै पूरा हुँदैनन् । तर, मैले धेरै प्रयास गरेको छु । हुनतः आफूले काम गरेको छु भन्ने सबैलाई लाग्छ । मैले गरिनँ त कोही पनि भन्दैन । तर मलाई लाग्छ; मैले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा नाम्खा गाउँपालिकाले केही न केही मुहार फेरेको छ ।
के काम गर्न बाँकी रह्यो त त्यसो भए ?
मैले चारवटा काम चाहेर पनि गर्न सकेको छैन । ती काम हुन्– पुल निर्माण । नाम्खा गाउँपालिकाको चार ठाउँमा पुलको निकै आवश्यकता छ । एउटा लिमी जोड्ने पक्की पुल, अर्को लिंगखोलामा झोलुंगे पुल र अरू दुई ठाउँमा काठे पुल निर्माण गर्छु भनेको थिएँ तर भएन ।
किन भएन त ?
लिमी सडक जोड्न कर्णालीमा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्छ । कर्णालीमा पक्की पुल बनाउन थोरै रकमले नभ्याउने । मैले प्रदेश र केन्द्रमा पटक–पटक यसबारे कुरा पनि उठाएँ तर कसैले सुनेन । एउटा बजेट अभाव र अर्को भौगोलिक विकटताले काम हुन सकेन ।
उपाध्यक्षज्यू, धेरैजसो जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा; पुरुष अध्यक्ष/मेयर र महिला उपाध्यक्ष/उपमेयर भएको ठाउँमा धेरैजसोले हिंसा सहनुपरेको भन्ने सुनियो । तपाईंलाई पनि समस्या भयो र ?
होइन, हाम्रोमा त्यो समस्या छैन । अध्यक्षज्यूले म अध्यक्ष तिमी उपाध्यक्ष भन्ने कुरा नै गर्नुहुन्न । हामी दुवै मिलेर काम गर्छौं । दुवैजना हरेक कुरामा सल्लाह गरेर काम गर्छौं । हाम्रो जिल्लाका अरू पालिकामा तपाईंले भन्नुभएजस्तै हामीले काम गर्न पाएनौं, हामीमाथि हिंसा भयो भन्ने उपाध्यक्षका आवाज मैले पनि सुनेको छु । तर, हामीकहाँ त्यस्तो छैन ।
आफू पुरुष भएर त्यस्तो हिंसा भोग्नु परेन भन्ने लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । हाम्रो पालिकामा एकै जातिको बसोबास बढी छ । हाम्रो जातिमा त्यस्तो भेदभाव/हिंसा हुँदैन । र, मलाई लाग्छ अबको दिनमा महिला उपाध्यक्ष हुँदा पनि यो समस्या नआउला ।
अनि, तपाईं त न्यायिक समितिको संयोजक पनि । कस्ता–कस्ता उजुरी आए ?
अहिलेसम्म परेका ५/६ उजुरी भनेको सम्बन्ध विच्छेदका छन् । त्यो भन्दा अरू उजुरी आएका छैनन् ।
सम्बन्ध विच्छेदको कारण चाहिं के पाउनुभयो ?
पहिले महिला दबाबमा बसेका थिए । अब सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने थाहा भयो । कानूनले अधिकार पनि दियो । महिला पनि बुझ्ने भए एउटा कुरा । अर्को कुरा, स्वतन्त्र हुन चाहेर पनि होला । कसैको दबाबमा किन बस्ने भनेर पनि सम्बन्ध विच्छेद हुन थालेको पाइएको छ ।
तपार्इंको पालिका चीनसँग सीमा जोडिएको पालिका पनि हो । वेला–वेला सीमा विवादको कुरा भइरहेको सुनिन्छ । खासमा समस्या के हो ?
हाम्रो पालिकाका दुईवटा (५ र ६) वडाको चीनसँग सीमा जोडिएको छ । सीमा विवादको कुरा चलेको हिल्सामा हो । गृह मन्त्रालयले सीमा विवादको कुरा छैन भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको भन्ने सुनेको छु । तर यहाँ सीमामा चीनले नयाँ स्तम्भ बनाएको छ । नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा २०६२ सालमा बनाएको सीमा स्तम्भ नम्बर ४, ५ र १२ लाई भत्काएर चीनले अलि घुमाएर नयाँ बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी सीमा विवाद छैन भन्छ एउटा कुरा; अर्को किन चीनले नेपाली पक्षलाई थाहै नदिई नयाँ स्तम्भ बनायो ? यसको केही न केही कारण अवश्य हुनुपर्छ ।
तपाईं त्यो सीमामा पुग्नुभएको छ ?
धेरै पटक पुगेको छु । अस्ति भर्खर मात्र पुगेर फोटो/भिडियो खिचेर ल्याएको छु । सबैलाई दिएको पनि छु । हिल्सास्थित ५ नम्बर प्लेट; हुम्ला, बझाङ र चीनको सीमामा रहेको ४ नम्बर प्लेट र अर्को लिमीको १२ नम्बर प्लेट नयाँ बनाइएको छ । नेपाल पक्षलाई थाहै नदिई नयाँ किन बनाउँछ ? त्यहाँ केही न केही स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । हामीले यो विषयमा केन्द्र सरकारसँग छलफल गरेका छौं ।
पहिलो पटकको कार्यकालमा शुरूका एक/दुई वर्ष अलमल भयो । कामको मेसो नै पाइएन । कामको मेसो पाइसक्दा कार्यकाल नै सकिन लाग्यो । त्यसैले पनि चाहेजति काम गर्न सकिएन । अब काम पनि जानेको छु । गर्दै पनि आएको छु, अबको चुनावमा अध्यक्षमा लड्ने योजना छ ।
सीमा विवादको कुरा उठिसकेपछि त्यहाँका बासिन्दलाई केही समस्या भएको छ ?
अहिलेसम्म समस्या त केही भएको छैन । तर, डर भने छ । यो पालिकाका दुईवटा वडा नेपालभन्दा चीनमा निर्भर छन् । त्यहाँका नागरिकले भेडाबाख्रा चराउन चीनको जंगलमा जानुपर्छ । अनि; खाद्यन्न, लुगाकपडा पनि त्यतैबाट ल्याउनुपर्छ । किनकि हुम्लाको सदरमुकाम पुग्नुभन्दा तिब्बत पुग्न सजिलो हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण दुई वर्षदेखि सीमा बन्द हुँदा नेपालबाटै खाद्यन्न लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अब पनि स्वतन्त्रबाटै उठ्नुहुन्छ कि पार्टीको टिकट लिएर ?
अब अध्यक्षको लागि नेपाली कांग्रेसबाट टिकट लिएर चुनावमा उठ्ने सोचमा छु । यसको लागि पार्टीमा कुरा पनि भइरहेको छ । तर, आकांक्षी अरू पनि छन् । पार्टीले टिकट पनि दिन्छु भनेको छ । अब मैले टिकट पाएर मलाई जनताले भोट दिनुभयो भने यो कार्यकालमा अधुरा रहेका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछु ।
अघिल्लो चुनावमा पार्टीले टिकट नदिंदा स्वतन्त्रबाट उठ्नुभयो । यो पटक पनि पार्टीले टिकट दिएन भने स्वतन्त्रमै उठ्नुहुन्छ ?
यो पटक त्यस्तो नहोला । पार्टीले दिन्छु भनिसकेको छ । यो पटक पार्टीको टिकटमै चुनाव लड्छु ।
नेपालमतका कुनै पनि सामग्रीबारे तपाईंको गुनासो, सुझाव र थप जानकारी अथवा नयाँ कुनै सूचना भए हामीलाई nepalmatnews@gmail.com मा इमेल पठाउनु होला।
यसरी जन्मियो महिनावारी स्वच्छता सञ्जाल !
गरेका काम जगमै छन्, देखिन समय लाग्छ - उपमेयर भण्डारी
'बडादशैं हिन्दूहरूको मात्र होइन, सबै नेपालीको हो'
पर्यटक लोभ्याउँदै लमजुङकाे बुङ र अक्टोपस झरना
बैतडीका एक युवाकाे मलेसियामा मृत्यु
निष्कर्षविनै माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न, भोलि फेरी बस्दै
आजदेखि वाग्मतीमा सार्वजनिक यातयातको भाडा बढ्‍यो, उपत्यकामा न्यूनमत १८ रुपैयाँ
जङ्गली हात्तीका बथानले धानबालीमा क्षति
वर्षाका कारण सात पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध
साफ च्याम्पियनसिपको उपविजेता नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो, खेलकुदमन्त्रीद्वारा स्वागत
दसैंमा दुई बैंक खुल्ने, कुन बैंककाे कुन शाखा कति वजे खुल्छ ? (नाम र समयसहित)
फेसबुक पोस्टका कारण बंगलादेशमा हिंसा भड्किँदा हिन्दू माथि आक्रमण, तीनकाे मृत्यु
पर्यटकीय केन्द्र बन्दै उदयपुरको ‘अर्जुन डहर’
नेपालगञ्जमा ४ जनाको मृत्यु भएपछि मुगु दुर्घटनामा मृतकको संख्या ३२ पुग्यो, २४ जनाको सनाखत
मुगु दुर्घटना अपडेटः १४ घाइतेलाई हेलिकप्टर र विमानबाट उपचारको लागि नेपालगञ्ज लगियो
समयले मासिदियो मेरो बालापनको दशैँ
मुगुमा बस दुर्घटनामा परी २३ जनाको मृत्यु
विषालु सर्पले टोक्दा युवकको मृत्यु
प्रधान सम्पादक: तुला अधिकारी
© 2021 कृष्णसार मल्टिमिडिया. All Rights Reserved Site by : i-Tech Nepal